renikaratra [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/8/8ce281b9a3ede4021482711b7184000a.xhtml failed
Ny reni-karatra no mizaka ny singa rehetra mamorona ny solosaina, misy ny toerana hipetrahan�ny tsirairay, ary misy ny ilaina rehetra mampandeha azy rehetra. Manan-danja lehibe izy na dia tsy dia re firy aza rehefa miresaka config-na solosaina ireny. Ho an�ny solosaina mitondra marika dia ny marika manko no miantoka ny fahatsarany, saingy ho an�ireo solosaina natambatra dia tsara foana raha fantatra ny reni-karatra miaraka aminy.
Ny chipset no tena mitondra ny tanjaky ny reni-karatra. Raha fehezina ny asany dia manao tetezana ahafahan’ireo donnees mivezivezy amin’ireo karazana singa rehetra mamorona ny solosaina. Mizara ho northbridge sy southbridge matetika ny chipset, ka ireto avy no asa tantanan’ny tsirairay aminy:
Ny northbridge no mitantana an’ireo fifanakalozana avo tosaka eo anivon’ny solosaina. Ao ny fitaterana ireo donnees anelanelan’ny RAM sy ny processeur, ao koa ny fitaterana ireo données mankany amin’ny karatra grafika.
Ny northbridge izany no mametra ny karazana processeur (marque, socket, sns), RAM (SD-RAM, DDR, DDR2, DDR3 sns) sy karatra grafika (AGP, PCI-e) mety amin’ilay renikaratra.
Misy fivoarana amin’izao izay entin’ny processeurs AMD Athlon 64, ka ao anatin’ny processeur ny controller-n’ny RAM fa tsy ao anaty chipset northbridge intsony.
Misy an’ireo chipset misy ny antsoina hoe IGP (Integrated Graphics Processor), ka tonga dia misy GPU (processeur graphique) ao anatiny. Ireny dia natao ho an’ny solosaina mora vidy kanefa mahomby, izay tsy ilana mividy karatra grafika intsony. Afaka manampy anefa matetika raha tena mila.
Ny southbridge dia mitantana ireo fifanakalozana iva tosaka misy eo ambonin’ny reni-karatra:
controleur PCI izay mitantana ireo bus PCI. Ny bus PCI moa no ahafahana manitatra ny solosaina amin’ny fanampiana karatra misy controleur hafa noho izay efa eo ambonin’ny reni-karatra
controleur PATA (na IDE) sy/na SATA izay mitantana ireo kapila henjana sy ireo famakiana CD sy DVD. Ny IDE mazàna mahazaka ananki-efatra amin’ireny, ny SATA misimisy kokoa noho izay.
controleur USB sy Firewire izay mitantana ireo tonelina USB sy Firewire. Izy ireny dia ahafahana mametraka fitaovana hafa ivelany hanitarana ny solosaina, ka peripheriques indrindra no tena ao anatin�izany (totozy, printer, webcam, ...) na kapila henjana na fikikisana finday.
controleur Rezo: mety hahitana karazany roa dia ny rezo misy fil sy ny wifi.
Ny BIOS (Basic Input Output System) dia memoire mirakitra ny parametres-n’ny config-n’ny reni-karatra. Mirakitra programa koa izy izay ahafahana manamboatra ireny parametres ireny, antsoina hoe “Bios configuration utility” na “Bios setup” na amin’ny mahazatra hoe ‘Bios’. Ny fanokafana an’io programa io matetika dia eo am-pamelomana ny solosaina no manindry Del na F2 na F10 eo amin�ny keyboard arakaraka an�ilay bios.
Kisary ohatra mampiseho ny drafitry ny chipset
Ny orinasa tena mpanamboatra chipset dia ny Intel, Nvidia, Ati, Via, Sis. Ny marika-na reni-karatra kosa dia ny Asus, Abit, MSI, Gigabyte, ... sns.
Ny fisafidianana reni-karatra dia tsy maintsy mifanaraka amin�ireo piesy rehetra hampiarahana aminy: processeur, RAM, karatra grafika, sns mba hifanaraka tsara ny socket, ny hafaingan�ny RAM sy ny AGP, sns.
Tsara ny reni-karatra raha mba efa misy ireo zavatra ilaina miaraka aminy, toy ny controller-na feo, rezo,
Tsara foana manana solosaina mora itarina. Izany hoe mba betsaka ny slot PCI, ports USB sy firewire, indrindra raha tsy miaraka aminy ireo controleurs mahazatra (rezo, usb, sns) na mikasa hanampy karatra hafa toy ny kara-peo, karatra TV sy radio, karatra wifi, sns ...
Tsara maka reni-karatra mitondra marika ohatra an’iretsy voatanisa etsy ambony raha azo atao.
renikaratra.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43